Ithegi: MP4 | Martech Zone
Wondershare UniConverter: Ukucutha ividiyo eninzi, uguqulo, ucinezelo, kunye noPhuculo
NgoLwesihlanu, Novemba 19, 2021 NgoLwesihlanu, Novemba 19, 2021 Douglas Karr
Njengoko abathengisi besebenza kunye nemigangatho emininzi yevidiyo - ukusuka kwiifayile zeefayile ezahlukeneyo zephequluli, imilinganiselo yamajelo ahlukeneyo, kunye nokunyanzeliswa kokusasazwa ngokufanelekileyo, ukusebenza ngeqonga lokuhlela ividiyo ukuvelisa iifayile eziyimfuneko kunokuba nzima. Eyona mveliso ilungileyo nefikelelekayo endikhe ndasebenza ngayo ukwenza oku Wondershare UniConverter. Njengomzekelo, ifemu yam ithumela ivenkile yakwaShopify Plus yomthengi wefashoni ngoku kwaye besibabandakanya.
Rev: Ukhutshelo lweVidiyo kunye neVidiyo, ukuGuqulela, ukuHamba, kunye nokuThumela
NgoLwesibini, Oktobha 29, 2019 NgoLwesibini, Oktobha 29, 2019 Douglas Karr
Kuba abathengi bethu banobuchwephesha obuphezulu, kuhlala kunzima ukuba sifumane ababhali bobabini bayile kwaye banolwazi. Ixesha elingaphezulu, sikhathele kukuphinda sibhale, njengababhali bethu, ke saye savavanya inkqubo entsha. Ngoku sinenkqubo yokuvelisa apho simisela khona istudiyo esiphathwayo sepodcast kwindawo leyo - okanye siyazicofa ngaphakathi- kwaye sirekhoda iipodcast ezimbalwa. Sirekhoda udliwanondlebe kwividiyo.
Sokumakishwa: Chaza kwaye usebenzisane neMveliso yeVidiyo yakho
NgoLwesithathu, Aprili 30, 2014 Douglas Karr
Ukuphawula kwakhona kukuvumela ukuba umeme abasebenzisi, basebenzisane kwaye uchaze iividiyo zakho. Ungasebenzisa ividiyo yakho esele ikhona okanye yeenkonzo zokubamba ezinje ngeVimeo, iDropbox, Ibhokisi, kunye neYouTube. Wonke umntu usebenza kwikhonkco labucala, elikhethekileyo, elikwenza ukuba wabelane kwaye unike ingxelo ngokuthe ngqo kwiqela lakho okanye kumxhasi wakho ngaphandle kwesidingo seakhawunti. Impendulo iqokelelwa ngesakhelo sevidiyo esinexesha elifanelekileyo kwigumbi lokujonga. Ungawathumela ngaphandle amanqaku ngqo kwisoftware yakho yokuhlela ividiyo